Suuq ghostwriter I Waxaan ka caawinnaa shaqada ardayda Papernerds
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibradda lagama maarmaanka u ah suuqgeynta
Meelaha takhasuska leh ee suuqgeynta ayaa ugu horreyntii la macaamilaya suuqgeynta macaamiisha ku wajahan ee dalabyada shirkadaha iyo ururada waaweyn. Seynisyahan ahaan, waxaad la macaamilaysaa ficilada iyo dabeecadaha u janjeedha macaamiisha si aad ugu fidiso dalabyo fiican suuqa. Aad bay u badan yihiin Shaqada guriga, Darajada Bachelor iyo Muxaadarooyin macallin ah, kuwaas oo ay tahay in la qoro inta lagu guda jiro koorsada. Arrin aad u adag haddii aad rabto inaad wax walba hoos dhigto hal saqaf. Qorayaashayagu waxay ku caawin karaan tan. Waxaan ku bixinaynaa shaqada waqtigaaga ugu dambeeya si tayo wanaagsan leh oo ay ku jiraan qashin-qubka. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed.
Inta lagu guda jiro barashadaada, waxaad heli doontaa kugu filan inaad ku sameyso mowduucyo cilmiyaysan sida suuqgeynta alaabada iyo adeegyada. Cilmi baaris ku saabsan shaqada dhaqaalaha marka laga eego dhinaca suuq geynta ayaa sidoo kale la falanqeeyay. Tusaalooyinka tan waa adeegsiga agabka xayeysiinta, dhacdooyinka, kafaala qaadka. Imtixaanadani waqti badan ayey ku baxayaan si ay u helaan buundooyin wanaagsan oo imtixaannada ah. Qoraal-gacmeedku wuxuu ku siinayaa shaqadaada tacliimeed.
Waxaan sidoo kale ku taageeri karnaa waqtigan oo aan kaa caawin karnaa sidii aad u mari lahayd Shaqada farsamada I caawi. Kaliya nala qaado Kontakt on, tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho at. Kadib waxaan dib kuugu soo wici doonnaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan qaadan doonaa mashruucaaga. Mawduucyada ku jira koorsada suuq-geynta waa kuwo aad u ballaaran. Tusaale ahaan, arday ahaan waxaad baari doontaa:
Foomamka suuqgeynta alaabada iyo adeegyada cusub
Maareynta hirgelinta dhacdooyinka iibka
Iskaashi lala yeesho shuraako ganacsi iyo kafaala qaadayaal
Ujeedada falanqaynta suuqgeynta ayaa ah horumarinta iyo soo bandhigida habab loogu talagalay mashaariicda suuqgeynta. Waxaad sidoo kale sharraxaysaa sida ay ku timid. Inta lagu jiro waxbarashadaada waxaad ogaan doontaa in falanqeyntan ay qaadanayaan waqti badan. Intaad wax baraneyso, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso cilmi baaris badan oo xagga cilmiga ah oo laga soo qaatay ilaha suugaanta. Sidoo kale waa inaad haysataa qoraalo waxbarasho sida Shaqada guriga, Kaaga shahaadada bachelor oder shahaadada Masterka curiso. Tani waa in dhammaan la sameeyaa inta lagu jiro waxbarashadaada. Caawinaad ka timaada xirfadleyda cirfiidka ghostwriter ayaa badanaa la aqbalaa. Gaar ahaan ardayda maadooyinka ganacsiga u janjeedha waxay u isticmaalaan caawimaaddan marar badan. Faa'iidooyinka tan waa kuwo iska cad.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku sameyn karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa qiyaasi karin waqti gaaban. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Hadda nala qaado Kontakt oo dalbo adiga shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale nala soo xiriiri kartaa mid dib u xusuusasho weydii. Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay ka caawin doonaan abuurista iyo horumarinta su'aasha. Qorayaashayagu waxay qoraan qoraaladaada.
Shaqadaada cilmiga ah ee sidaas ah Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD oder Qoraal waxaad naga heli kartaa inaan kuu soo qorno. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale qoraa si dhakhso leh ayuu uga bixi doonaa mowduuca. Adeegsiga adeegyadeenu wuxuu ku siinayaa xorriyad badan. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa talooyinka qoraaga ghost ee tayada qoraalkaaga ee ku saabsan daraasaddaada tacliimeed. Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aagaggooda cilmi-baarista waxayna leeyihiin shahaado maadadooda ah. The Bachelor iyo shahaadada waxaa lagu dhammaystiri karaa dadaal badan. Markaad qalin jabiso, waxaa jira siyaabo fara badan oo aad ku raadsan karto xirfad sayniska tacliimeed, tusaale ahaan.
Qoraalka Ghost ee Suuqgeynta
Qorayaasheennu si cilmiyeysan ayey ugu tababaranyihiin maaddooyin badan oo ku saabsan suuqgeynta. Qorayaashayaga ghostwriters waxay mar hore abuureen waraaqo aad u tiro badan. Waad ku dhali kartaa shaqada soo socota:
Abuuritaanka su'aalo-weydiimaha sahaminta ee aad ka hayso adiga shahaadada bachelor u baahan
Waxaan tixgelineynaa mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna shaqsi ahaan, iyadoo ku xiran hadba hawsha gacanta lagu hayo, waxaan kugula talineynaa qoraaga cirfiidka oo sifiican ugu tababaran duurka. Dabcan, qoraaladeenna ghostwriters waxaa loo heli karaa inay yihiin tifaftireyaal, akhristeyaal ama tababarayaal. Waxaan uga jawaabnaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow. Tani waxay ku dhacdaa dhammaan waaxyaha iyo dabcan sidoo kale maadadaada sayniska. Noo soo dir codsi macaamil waxaanan kuu samayn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga. Gebi ahaanba caqli badan Waxaan kaa caawineynaa shaqada qibrada leh. Qoraal-gacmeedku wuxuu ardayda ka caawiyaa inay abuuraan warqaddooda waxbarasho. Hababka xasaasiga ah si dhif ah ayey ardayda si macno leh ugu isticmaalaan, in kasta oo fahamka hababku aad muhiim ugu yahay cilmi baarista. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Suuqgeynta Cilmi baarista
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrad sannado badan aaggooda cilmi-baarista umana baahna inay isbartaan muddo dheer. Waad ka faa'iideysan kartaa tan. Qoraal-gacmeedku wuxuu macno samaynayaa ku dhowaad dhammaan shaqooyinka tacliimeed ee maadadaada waxbarasho. Ka dalbo qoraalkaaga waraaqdaada ereyga cilmiyeed annaga oo ka hel dalab aan qasab ahayn. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor.
Rajada xirfadeed ee leh shahaadada suuqgeynta
Talo siinta shirkadaha suuqgeynta alaabada cusub,
Suuqgeynta / xayeysiinta hay'adaha bulshada iyo dhaqamada iyo mashaariicda,
La xiriir kafaala qaadayaasha
Horumarinta mashruuca ee carwooyinka ganacsiga iyo dhacdooyinka
Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen! Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona.
Suuqgeynta shirkadaha ganacsiga
Badanaa, qalin-jabinta ka dib, ardaydu waxay shaqo ka helaan shirkadaha suuq-geynta alaabada ama adeegyada. Naadiyo waaweyn iyo ururo ayaa sidoo kale bixiya nashaadaadyo suuqgeyn ah.
Qayb ka mid ah barashada suuqgeynta ayaa ah inaad ku kasbato khibrad wax ku ool ah layliyo aad ku baran karto kuna tijaabin karto xirfadahaaga mustaqbalka. Qaybaha shaqada si cad ayaa loo gaarsiiyaa. Layli barasho ayaa kuu suurtagelinaysa inaad tijaabiso hawlahaaga iyo waxqabadyadaada ku jira shaqo wax ku ool ah. Meherad ahaan, waa inaad qortaa warbixin khibrad ah oo muujinaysa shaqooyinka shaqo ee aad dhammaysay iyo dadka aad ka qaybqaadatay hawlahaas. Marar badan, qorista warbixinta noocan oo kale ah waxay umuuqataa waqti aad u dheer oo adag. Marka waa inaad qortaa khibradaha tababarka, taas oo aan had iyo jeer u sahlaneyn arday badan. Warbixinta layliska ayaa badiyaa qayb ka ah imtixaanka ugu dambeeya. Waxaan kuu soo bandhigi karnaa inaad kuu qorto warbixinta tababarka. Khabiirro khibrad leh oo khibrad leh oo wax qora ayaa shaqada ku qora si tayo wanaagsan leh.
Barashada suuqgeyntu waxay ku lug leedahay barashada waxyaabo badan oo wadnaha ah. Shaqada guriga, shahaadada bachelor iyo shahaadada Masterka waa in la qoraa oo lagu daraa qiimaynta ugu dambaysa. Tani waxay noqon kartaa mid daal badan badanaana laguma gaarin mudada daraasadda ee la cayimay. Waa inaad ka faa'iideysataa taageeradayada si aad ugu dhammaysato waxbarashadaada buundooyin aad u wanaagsan xilli la maareyn karo. Kaliya nala qaado Kontakt on. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaala talino oo aan kaa taageerno waxbarashadaada. Qorayaal khibrad leh oo khibrad leh ayaa abuura shaqo. Mid noo soo dir Mail ama na soo wac. Waxaan kuu soo bandhigeynaa mid bilaash ah dib u xusuusasho waqti adiga kugu habboon. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee dhanka suuqgeynta